မြှောင်းပုံစက္ကူသေတ္တာကိုလက်ဆောင်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်, အဝတ်အစား, စျေးဝယ်, အလှကုန်, ပီဇာထုပ်ပိုးစသည်တို့. စျေးနှုန်းကပြိုင်ဆိုင်မှုနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့က Eco- ဖော်ရွေဖြစ်ကြသည်.
မြှောင်းပုံသေတ္တာသည်အလင်းဖြင့်အမြန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သင့်တော်သည်, ထုတ်ကုန်များအတွက်အားကောင်းတဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး function ကို. ဒါကြောင့်ခေါက်နိုင်သောသေတ္တာများတစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာကတည်းက, ဒါကြောင့်သိုလှောင်မှုနေရာချွေတာ, ထုတ်ကုန် '' အထုပ်ကုန်ကျစရိတ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေကုန်ကြမ်းနှင့်အတူကယ်တင်ပါ.
ပစ္စည်းအမည် Feature printed Factory Price B-Flute Corrugated shipping boxes custom mailer box
အရောင် CMYK + Pantone အရောင်
အခြားစက္ကူ အနုပညာစက္ကူ, ကွမ်းခြံကုန်း, kraft စက္ကူ, စက္ကူ coated, အထူးစက္ကူ
Surface Finishing သုတ်ဆေး, တောက်ပ lamination, Matt lamination, hot stamping, ဖောင်းကြွ, ဖြူဖြူကျော်သိန်း, ခရမ်းလွန်အစက်အပြောက်, သေဆုံးစသည်
ပုံနှိပ်ခြင်း အော့ဖ်စက်ပုံနှိပ်, Flexo ပုံနှိပ်ခြင်း, မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း
စက်မှုလုပ်ငန်းအသုံးပြုမှု ချောကလက်, ဝိုင်, အလှကုန်, ရေမွှေး, အဝတ်အထည်များ, လက်ဝတ်ရတနာ, ဆေးရွက်ကြီး, အစားအစာ, လက်ဆောင်နေ့စဉ်ကုန်စည်, အီလက်ထရောနစ်, အိမ်များထုတ်ဝေခြင်း, လက်ဆောင်ကစားစရာများ, နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များ, အထူးပစ္စည်း, ပြပွဲစသည်တို့
လိုဂို OEM နှင့် ODM ရရှိနိုင်ပါသည်, မင်းတို့လိုဂိုကိုစက္ကူသေတ္တာထဲမှာ print ထုတ်လို့ရတယ်
ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ ကုန်သွယ်ရေးအာမခံချက်, T / T, ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ, MoneyGram သို့မဟုတ် Paypal စသည်
MOQ 1000အရွယ်အစားနှုန်း PCs
ပို့ဆောင်ချိန် 1-3 နမူနာများအတွက်ရက်, 7-13 အမြောက်အများအဘို့အရက် (သင်၏အမှာစာပေါ်မူတည်သည်)
* B FLUTE: 3မီလီမီတာ
* C FLUTE: 4မီလီမီတာ
* E FLUTE: 1.5မီလီမီတာ
* F FLUTE:.2မီလီမီတာ
We have our own factory in Baiyun District, Guangzhoui, တရုတ်, so we have an advantage in price and quality control.
3)the samples will be sent within7ရက်ပေါင်း.
It is usually delivered within 15 ရန် 20 working days after payment and document confirmed. If your order is urgent, we will adjust the schedule appropriately and continue to follow up the production process for you.
In order to save your time, you need to provide us with the quantity, အရွယ်အစား, printing method , material of the box, You will receivearesponse in less than 24 နာရီ.